I-SPLASHROCK ENGUNZULU WENTSHONA//IGUMBI LOKUPHUMA KWELANGA - I-Airbnb
I-SPLASHROCK ENGUNZULU WENTSHONA//IGUMBI LOKUPHUMA KWELANGA
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMellody And Scott
I-Splashrock enzulu kwintshona yindawo yokuhlala yabucala epholileyo yesiqithi eneendawo ezine ezahlukeneyo zokurentisa ngeeholide ezineendawo ezimbini zokukhempisha ezinomgodi womlilo kunye negumbi lokuhlambela langaphandle / ishawari. Sinedama elingenasiphelo lamanzi etyuwa elijonge ukutshona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga kuyamangalisa ukusuka kumda wamanzi. Hamba uye kwindawo yokutyela yasekhaya kunye nebar kwicala elithe cwaka le-Negril. Le ndawo yiGem efihliweyo yeWest End.
Eli gumbi lipholileyo linegumbi lokulala lolunye lolohlobo. Sinebhedi ephindwe kabini eyenziwe ngamaplanga asekuhlaleni aseJamaica. Eli gumbi elinye lokulala liqukuqela kwishawari kunye negumbi lokuhlambela intloko yeshawari yenziwe ngeqokobhe leconch elisuka elwandle kunye nomthi wendalo wepine onomphezulu ovulekileyo wokubukela iinkwenkwezi ngelixa uthatha ishawa ebusuku. Emva koko uphume kwishawari uye kwibalcony yelanga, wonwabele impepho yolwandle ngelixa ujonge kuLwandle lweCaribbean okanye udlale umdlalo weedominoes nabahlobo bakho.
Iintsuku eziyi-7 e West End
Kwingingqi yethu kuthe cwaka kakhulu. Kukho iindawo zokutyela kunye neebhari ezikufutshane kumgama ohambahambayo ocetyiswayo (PELICAN LOOKOUT BAR AND RESTAURANT) ukonwabisa kunye nokutya okumnandi. Kukho iivenkile zegrosari ezincinci zesitayile saseJamaica, ibha kunye neevenkile zokungcakaza kufutshane. Yiba namava kwindawo engcwele ye-hummingbird ye-Negril, indlu ye-Negril Light, i-Famous Ricks Cafe iindawo ezininzi zokutyela kunye nemivalo yokubukela ukutshona kwelanga.
Ndingumyalezo kude masiqhagamshelane no-Airbnb